धनतेरसको एक दिन अगाडि जान्नुहोस् ९ महत्वपूर्ण नियम, भोलि गल्ती सच्याउने मौका मिल्दैन – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on धनतेरसको एक दिन अगाडि जान्नुहोस् ९ महत्वपूर्ण नियम, भोलि गल्ती सच्याउने मौका मिल्दैन
धार्मिक व्यूरो । धनतेरसको दिन माता लक्ष्मी पहिलो पटक घरमा आउनुहुन्छ। यस शुभ पर्वमा माता लक्ष्मीसँगै कुबेर र भगवान धन्वंतरीको पूजा गर्ने विधि छ ।धनतेरसको दिन नयाँ सामान किनेर घरमा ल्याउनु निकै शुभ मानिन्छ । तर यस पर्वमा किनमेल गर्नुका साथै केही विशेष नियममा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । जानौं धनतेरसको दिन कुन–कुन गल्तीबाट बच्नुपर्छ।
घरमा झ–ग—-डा नगर्नुहोस् – धनतेरसको दिन घरमा पटक्कै पनि झ—ग—-डा नगर्नुहोस्। लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न पार्न चाहनुहुन्छ भने घरका नारीहरूको सम्मान गर्नुहोस् । यस दिन झ—ग—डा र झ—ग—डा—बाट टाढा रहनुहोस्।कसैलाई उधारो नदिनुहोस् – धनतेरसको दिन कसैलाई ऋण दिन नदिनुहोस्। यस दिन घरबाट लक्ष्मीको प्रवाह ननिस्कन दिनुहोस्। ऋण वा ऋण सम्बन्धी कारोवार दिवालीपछि मात्रै गर्नु राम्रो हुन्छ ।
← रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भयो ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी → घरमा उडुस परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी रोक्नुस् उडुस आतंक